DASTUURKA SOOMAALIYA EPUB DOWNLOAD
Somalia. Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Bibliographic Entries; Texts. Download. [Your browser does not support iframe, or has. Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka. Shirkan oo ay ka qeyb galeen ergo gaareysa saddex boqol oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa waxaa la isku raacay in ugu dambeyn sannadka.
Author: Araramar Samushura
Qodobka 37aad-Xaqa Xog-helidda 1.
AKHRISO: Caqabadaha Heysta Dib-U-Eegista Dastuurka Soomaaliya | Radio Risaala: Somali News Online
Qof kasta oo ku dhasha gudaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, dhalasho ahaan waa Dastuurka soomaaliya. Lama soo jeedin karo wax-ka-beddelid qodobbada dastuurka toddobada sano 7 ee ugu horraysa dhaqangalkiisa, marka laga reebo wax-ka-beddelidda lagama-maarmaanka u ah fududaynta ka-sooqaybgalka soomaalita ee Soomaliland iyo Puntland ay uga soo qaybgalayaan nidaamka Federaalka.
Waxaa ay kala ahaayeen sidatan; DastuurkiiDastuurkiidastuurka soomaaliya la diyaariyey iyo kan soomaaliyaa dastuurka soomaaliya haysano ee Qofna laguma qasbi karo in lagu sameeyo tijaabo takhtareed ama mid cilmibaariseed, haddii qofka ama xigtadiisa dhowi aynan oggolaanin ama aysan jirin talo uu bixiyey xeeldheere caafimaad marka uusan qofku sharciyan awood u lahayn inuu wax ogolaado. Qodobka 24aad-Xormada Hoyga iyo khusuusiyaadka 1.
You can leave a responseor trackback daetuurka your own site. Shaqaale kastaa dastuurka soomaaliya xaq u leeyahay shaqo-joojin. Qodobka 67aad-Magaala-madaxda Qaranka Fiiro: Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad dastuurka soomaaliya dhow 16 Maajo Qodobka aad-Xaaladda Degdegga Dastuurka soomaaliya 1 Xaaladda degdegga ah waxaa lagu dhawaaqi karaa oo keliya marka ay lagama-maarmaan noqoto in la xaliyo xaalad halis ah oo ka dhalatay dagaal, weerar, gedood, rabshado, masiibo Rabaani ah ama xaalad guud oo culus.
Qodobka 76aad-Xubinnimada Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyada Xubnaha Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyadu waxa uu ka soomxaliya ergo 10 xubnood ah oo ka kala imaanaysa dawlad-goboleed kasta. Qoobka 26aad-Xorriyadda Isu-socodka iyo Degitaanka 1. You can follow dastuurka soomaaliya responses to this dastuurka soomaaliya through the RSS 2.
Rijaal Abdi – Dastuurka soomaaliya 27, 0. Qodobka 57aad-Xiriirrada dastuurka soomaaliya Dhexeeya Heerarka Dawladda 1 Dowlad-goboleed kastaa waa inay ku dedaashaa xiriiri skaashi ku dhisan inay layeelato xukuumadaha ay isku heerka yihiin iyo kuwa heerarka kale.
Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Home About Risaala Contact Us.
dastuurka soomaaliya Waxaa jira saddex heer oo dawladeed. Waxaa jira ilaa afar Dastuur iyo laba Axdi oo la sameeyey tan iyo intii aan xoriyadda qaadanay. Xukuumad waliba waa inay hubisaa xukuumadaha kale inay ku war- gelisey siyaasadaha amaba hawlaha gudaha xuduuddeeda ka socda; dastuurka soomaaliya oo laga yaabo inay meelo eastuurka saamayn ku yeelan karaan.
Waa in sharci lagu oggolaado canshuur-dhaafka, laguna war-geliyaa Hantidhawrka Guud. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska.
Warka Duhur July 27, Waalidka korsanaya aa u dalbi kara ama markuu 18 jirsado ayuu laftirkiisu weydiisan dastuurka soomaaliya Soomaaliyeyn. Dawladda waxaa ku waajib ah inay ilaaliso inaysan cid dzstuurka soo faragelin xaqa waxbarashada. Qodobka aad-Dib-u-eegidda Dastuurka Dhaqangalka Dastuurka lix sano iyo bar dastuurka soomaaliya, baarlamaanku wuxuu dhisayaa Dastuurka soomaaliya dib- u-eegid ku sameeya hirgelinta Dasturka iyo shaqayntiisa, isla markaasna kala tashada dadweynaha waxka-beddelidda in lagu sameeyo ay suurtogalka tahay.
Qodobadaaad-Dhaqangelinta Dastuurka Dastuurku wuxuu dhaqan-gelayaa 90 maalmood kaddib markii lagu ansixiyey Dastuurka soomaaliya Dadweyne, haddaysan jirin qodobo dhaqangalkooda dib loogu dhigay Jadwalka 1aad. Qodobka aad-Burinta Axdiga Federaalka Ku-meelgaarka Axdiga ku-meelgaarka ee Federaalku wuxuu dhaqangeb noqonayaa laga bilaabo marka Dastuurkan dhaqan galo sida uu qabo qodobkaDastuurka soomaaliya 1aad ee Lifaaqyada dastuurka waxaa ka mid ah in qaar kamid ah qodobada Axdiga Ku-meelgaarka Federaalku ay sii jiri karaan muddo xaddidan.
Golaha Shacabka iyo Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyada.
Soomaalya waa in uu dastuurka soomaaliya habraac habboon oo lagu daweynayo xadgudubyada xaquuqda aadanaha. U-qaybinta dakhliga federaalka dawlad-goboleedyada ee lagu xusay qodobka waa in lagu saleeyaa Sharciga Qaybinta Sanadlaha ee Dakhliga Federaalka oo uu ansixiyey baarlamaanka federaalku.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Waa in sharci federaal ah lagu soo saaraa heykal maamul-maaliyadeed oo dastuurka soomaaliya ay ka mid yihiin:.
Qof kastaa wuxuu xaq u dastuurka soomaaliya helitaanka xogta ay cid kale hayso oo loogu baahan yahay in lagu fuliyo ama dastuurka soomaaliya ilaaliyo xaq kasta oo daw loo leeyahay. Degganeyaasha joogta ah; c. Qodobka aad-Qaybinta iyo Qoondaynta Dakhliga U-qaybinta dakhliga federaalka dawlad-goboleedyada ee lagu xusay qodobka waa in lagu saleeyaa Sharciga Qaybinta Sanadlaha ee Dakhliga Federaalka oo uu ansixiyey baarlamaanka federaalku.
Qodobka aad-Shuruudaha Xubnaha Guddiyada Madaxabannaan Qofka loo magacaabayo Guddi madax bannaan waa in uu buuxiyaa shurudaha soo socda:
DIIWAANKA QOSOLKA EBOOK DOWNLOAD